Wasiirada Haweenka P/land oo Xariga ka Jartay Hotel Laga Furay Garoowe+Sa​wiro – SBC
Wasiirada Haweenka P/land oo Xariga ka Jartay Hotel Laga Furay Garoowe+Sa​wiro
Hotelkaan oo ka mid ah huteelada casriga ah ee ku soo kordhaya magalada Garoowe xili dhawaan la filayo in Garoowe lagu qabto shirka qorshe howleedka Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay xaflada furtaanka madaxada gobolka xubno ka socda golaha wasiirada iyo marti sharaf kale oo lagu casumay.
Ijaabo shiikh xasan oo ah mulkiilaha hotelka kana mida ah qurba joogta dalka dib ugu soo labatay maal gashigana ku samaynaysa ayaa sharaxaysa baahiya ay dareemeen isla markaana ay fureen hotelka cusub iyada oo tilmaantay in ay ganacsiyo hore kulahayeen Garoowe hadana ay ku soo kordhiyeen hotelkan cusub oo ka kooban 60 qol oo jiif ah oo ku qalabaysan agabyo casri ah iyo hool wayn oo shirarka loogu talagalay isla markaana qaada ku dhawaad 300 qof.
Duqa degmada Garoowe C/casiis Nuur Cilmi oo ka mid ah madaxda lagu casumay xaflada lagu furayey hotelka ayaa sheegay in uu dhankiisa aad ugu faraxsanayahay hotelkan cusub oo ku soo biiray degmada Garoowe uuna soo dhawaynayo qurba joogta dalka maal gashiga ku samaynaya isaga oo intaa ku daray in uu ugu yeerayo qurba joogta kale in ay ka qayb qaataan maalgashiga dalka .
Wasiirka wasaarada haweenka iyo arimaha qoyska marwo caasho geele diiriye oo xariga ka jartay furitaanka hotelka ayaa muujisay in ay si aad ah ugu faraxsanatahay in ay haween leeyihiin ganacsigan cusub waxaana ay intaa ku dartay in dumarku yihiin lafdhabarta bulshada soomaliyed tan iyo burburkii Soomaliyana ay igu ahaayeen kuwa quudinayey qoysas badan ugu dambayntiina waxay ugu yeertay gabdhaha qurba joogta ah in dalka dib ugu soo laabtaan maal gashi ganacsina ay sameeyaan.
Hotelkan waxaa uu ka mid noqon doonaa kuwa ugu waawayn Puntland iyadoona mudooyinkan dambe ay jireen maal gashi ganacsi u badan oo ay samaynayeeen qurba joogta reer punland ee dalka dib ugu soo laabtay.
Ijaabo shiikh xasan oo ah gabadha furatay Hotelka waa xaaska maxamad C/raxmaan faroole